जाट-नेपालको साधारणसभा भदौ २५ मा, नयाँ कार्यसमिति आउने | .:: Welcome || Paryatannews
Home » फ्ल्यास न्यूज » जाट-नेपालको साधारणसभा भदौ २५ मा, नयाँ कार्यसमिति आउने
जाट-नेपालको साधारणसभा भदौ २५ मा, नयाँ कार्यसमिति आउने
पर्यटनन्यूज, काठमाडौं । पर्यटन पत्रकार संघ (जाट–नेपाल)को सातौं बार्षिक साधारणसभा तथा निर्वाचन यही भदौं २५ गते हुने भएको छ ।
केही दिन अघि बसेको जाट नेपालको कार्यसमितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । साधारणसभा भव्य रुपमा सम्पन्न गर्नका लागि संघका अध्यक्ष देवीप्रसाद पन्तको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय मूल आयोजक समिति समेत गठन गरिएको छ । साधारणसभाको तयारी, अतिथि निमन्त्रणा, कार्यक्रम व्यवस्थापन, सदस्यता नवीकरण तथा विविध कार्यका लागि सदस्यहरुलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । साधारणसभाकै अवसरमा जाट नेपालका संस्थापक अध्यक्ष स्व. हरिराज जोशीको सम्झनामा ‘स्व. हरिराज जोशी पर्यटन पत्रकारिता पुरस्कार’ समेत वितरण गर्ने भएको छ । संस्थापक अध्यक्ष जोशीलाई पर्यटन पत्रकारितामा सर्वोच्च स्थान हाँसिल गर्न सफल भएको मुल्यांकन गर्दै पत्रकारिता पुरस्कारको राशी रु. ८,८४८ राखिएको छ । त्यस्तै, सोही अवसर पारेर पर्यटन क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने व्यवसायी तथा संघसंस्थालाई समेत विशेष सम्मान गरिने जाट नेपालका सचिव हरिशरण न्यौपानेले बताए ।
साधारणसभासँगै जाट नेपालको निर्वाचन पनि सोही दिन गरिने भएको छ । निर्वाचनले १५ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नेछ । नयाँ नेतृत्वका लागि आन्तरिक छलफल सुरु भएको छ । संघलाई गति दिन र नयाँ भिजनका साथ कार्यक्रम ल्याउनका लागि नयाँ नेतृत्वको खोजी भएको छ । सहमती कै आधारमा नयाँ कार्यसमिति आउने गरि छलफल थालिएको र जस्मा अध्यक्ष, महासचिव र कोषाध्यक्ष पदमा नयाँ व्यक्तिलाई ल्याउने गरि गृहकार्य थालिएको बताइएको छ । आकांक्षीहरु धेरै रहेका कारण कुन पदमा को रहने भन्ने विषय भने टुंगिसकेको छैन ।
जाट-नेपालको साधारणसभा भदौ २५ मा, नयाँ कार्यसमिति आउने Reviewed by Shiva Shrestha on Aug 29 . पर्यटनन्यूज, काठमाडौं । पर्यटन पत्रकार संघ (जाट–नेपाल)को सातौं बार्षिक साधारणसभा तथा निर्वाचन यही भदौं २५ गते हुने भएको छ । केही दिन अघि बसेको जाट नेपालको कार्य पर्यटनन्यूज, काठमाडौं । पर्यटन पत्रकार संघ (जाट–नेपाल)को सातौं बार्षिक साधारणसभा तथा निर्वाचन यही भदौं २५ गते हुने भएको छ । केही दिन अघि बसेको जाट नेपालको कार्य Rating: 0